Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo Muqdisho u yimid wada tashiga Xukuumadda – STAR FM SOMALIA
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo Muqdisho u yimid wada tashiga Xukuumadda
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo sanad ka hor loo caleema saaray Ugaaska Beesha Xawaadle ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan socdaalkiisa.
Ugaaska ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku soo dhoweeyay Taliye kuxigeenka Booliska iyo mas’uuliyiin kale.
Wararka qaar ayaa sheegaya in imaanshihiisa Muqdisho ay la xiriirto la kulanka Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha oo Muqdisho ugu yeeray, si uu qeyb uga noqdo wada tashiyada lala yeelanayo Odayaasha dhaqanka
Ugaaska oo ah nin mayal adag, hadalada aan la ganban ayaa la xusuustaa sida uu uga soo hor-jeeday maamul u sameyntii Labada Gobol iyo in Hiiraan lagu daro Shabeellaha Dhexe oo ugu dambeyn loo dhisay Maamul la magac baxay Hirshabeelle.
Waxaa lagu wadaa in Ugaaska kulamo la qaato Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Gobolka Hiiraan, sidoo kale waxaa la filayaa inuu la kulmo duubabka dhaqanka ee Muqdisho ku sugan.
Ugaas Xasan ayaa ka hor inta aan loo caleema saarin Ugaasnimada, waxaa uu ka mid ahaa shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda, waxaana Muqdisho uu ka tagay, kaddib geeridii walaalkiis Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif.
Madaxda dowladda ayaa maalmihii u dambeeyay Muqdisho ka waday wada tashiyada ku aadan dhismaha Golaha Wasiirada cusub oo dhowaan lagu wado inuu ku dhawaaqo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh oo loo dhaariyay Xubinimada Baarlamaanka
Wasiirka Amniga Puntland oo ku baaqay in la toogto maxaabiista dilka ku xukuman ee ku jira Xabsiyada